Izinkundla Zokuxhumana | Martech Zone
Eminyakeni engu-XNUMX edlule njengoba ithelevishini yayivela enkundleni, izikhangiso ze-TV zazifana nezikhangiso zomsakazo. Zaziqukethe kakhulu umuntu othanda ukujama omi phambi kwekhamera, echaza ngomkhiqizo, ngendlela ayengayenza ngayo emsakazweni. Umehluko kuphela ukuthi ubumbona ephethe umkhiqizo.
Njengoba i-TV ikhula, kanjalo nokukhangisa. Njengoba abathengisi befunda amandla ento ebukwayo bakha izikhangiso zokubandakanya imizwa, ezinye bezihlekisa, ezinye bezimnandi noma zinemizwa kanti ezinye zibucayi futhi zivusa imicabango. Ngenkathi isibukeli esijwayelekile simnyama kakhulu namuhla, sisengashukunyiselwa ukuhleka, ukukhala noma ukwenza ngesikhangiso esifanele. (Ezimweni eziningi, sizobe sikubuka ku-Youtube).
Idizayini yeWebhu ihambisane nenqubo efanayo, kusukela esikhathini samasayithi encwajana, sathuthela ekukhanyeni nasezihlokweni ezigqwayizayo ukujabulisa isivakashi, futhi ekugcineni safika kumasayithi alula, aphathekayo, ahamba lapho amakhasimende ethu ekhona, anezici ezisebenzisanayo zokwakha ukumaketha izingxoxo nezivakashi.
Futhi manje, sibona imithombo yezokuxhumana ihamba ngezigaba ezifanayo. Kusukela ezingxoxweni eziyimbangela yokusakazwa kwemiyalezo yokuthengisa, abathengisi abanobuhlakani bafunda ukuthola ukuthi ibhalansi phakathi kwengxoxo, ukuzibandakanya kanye nokuthengisa okuncane okufakwa phakathi. Njengoba kukhula okuphakathi, baningi kakhulu osomabhizinisi abancane abakuthatha ngokungathi sína njengengxenye yokukhangisa kwabo hlanganisa.
Ingabe lokho kungukufisa noma ngabe kukhona ushintsho olwenzekayo ngempela? Sifuna ukwazi, ngakho-ke futhi futhi siqhuba ibhizinisi elincane inhlolovo yezokuxhumana nokuqhathanisa imiphumela neminyaka edlule. Sithemba ukuthi sizokuba nemiphumela eminingi kakhulu, kepha ukuphawula okuningi esikubonile kuze kube manje kukhombisa ngokusobala lesi simo sokuvuthwa.
Ngangivame ukucindezela ngokubhuloga esimisweni futhi ngikhathazeke ngokuthi ukubalwa kwamazwana bekungekho phezulu kakhulu. Manje sengikhululekile futhi ngibhala ibhulogi lapho nginesihloko sentshisekelo futhi ngihlanganisa okuthunyelwe kwami ​​kuma-workshops abukhoma nasekuqeqesheni. Amaklayenti athanda izixhumanisi zezihloko ezithakazelisayo futhi ngiyabona ukuthi zivakashele - noma ngabe azishiyi mazwana.
Ukuchitha isikhathi esiningi kuma-mediums ambalwa. Ukucabanga ngihlale ngifuna ipulatifomu entsha elandelayo, uma ifika, sizodela eyodwa endala.
Kade ngisebenza ukudala isu elilula futhi eligxile ekusebenzisaneni kakhulu namakhasimende angaba khona.
Kuthiwani ngawe? Ingabe usuyishintshile indlela yakho yokwenza lokhu okuvuthayo? Uyayibona imiphumela? Singathanda ukwengeza okuhlangenwe nakho kwakho ku- inhlolovo yezokuxhumana. kuzothatha imizuzu embalwa (Imibuzo engama-20 kuphela). Ngemuva kwalokho funa eminye imiphumela lapha ngokuhamba kwesikhathi kule ntwasahlobo.
I-Social Media Lifecycle